Taageeridda Moldova xor iyo dimoqraadi ah
“Muddada soddonka sano ee uu jiro xiriirka diblamaasiyadeed ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Moldova, waligeen ma wajahin xaalad deg deg ah oo adag oo la mid ah tan maanta nasoo food-saartay,” Sidaasi waxaa shaaca ka qaaday Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken mar uu dhawaan booqasho ku tagay Moldova.
Dagaalka aanan qiilka laheyn ee Kremlin-ka ee uu ku qaaday Ukraine ayaa oodda ka qaaday qalalaasho bani’aadannimo kuwaas ooh adda saameeyay guud ahaan dowladaha gobolka oo ay ku jirto Moldova. In ka badan 240,000 oo ruux oo ka qaxay Ukraine ayaa u tallaabay xadka Moldova, tirada ayaa sii kordheysa.
Xoghaye Blinken ayaa uga mahadceliyey Moldova soo dhaweynta iyo ilaalinta dhammaan kuwa ka soo cararay dagaalka Ruushka ee Ukraine. "Maraykanku waxa uu samayn doonaa wax kasta oo uu ku caawin karo," ayuu yidhi xoghaye Blinken.
"Maamulkeenna waxa uu ka codsaday Congresska $2.75 bilyan oo gargaar degdeg ah iyo gargaar bini'aadantinimo, si loo daboolo baahiyaha dadka nugul iyo bulshooyinka gudaha Ukraine labaduba. Iyo sidoo kale in la caawiyo dalalka sida Moldova ee taageeraya qaxootiga iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee ka baxsan Ukraine."
Wuxuu intaas ku daray in beesha caalamka ay sidoo kale mas'uuliyad ka saaran tahay inay Moldova ka caawiyaan howshan.
Dowladda Mareykanka waxay taageereeysaa madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Moldova si ay u raacdo waddada dimoqraadiyadda, dhaqaale loo dhan yahay oo barwaaqaysan, iyo xiriir dhow oo lala yeesho waddamada iyo hay'adaha Yurub.
Mareykanka wuxuu sii wadaa inuu Moldova kala shaqeeyo arrimo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan gaarsiinta boqollaal kun oo tallaalka COVID-19 ah iyo malaayiin doollar oo gargaar la xiriira masiibada cudurka Covid. Nabadgelyada tamarta weyn ayaa muhiim u ah madax-banaanida Moldova. Xoghaye Blinken wuxuu xusay, "Waxaan ku maalgelin doonnaa $18 milyan oo dollar sanadaha soo socda si aan gacan uga geysanno xoojinta iyo kala-duwanaanta qaybta tamarta ee Moldova."
Mareykanka wuxuu sidoo kale taageersanyahay wadahadallada uu hormuudka ka yahay Ururka Iskaashiga Nabadda Yurub ee gaabiyo OSCE, si xal dhameystiran looga gaaro colaadda mandiqadda Transnistrian taas oo ilaalineysa madaxbannaaniada iyo midnimada dhuleed ee Transnistria, iyada oo maqam gaarka laga siinayo gobolka.
"Wadamada ixtiraamaya xuquuqul insaanka, ilaaliya sharciga, oo taageera maamul loo dhan yahay oo lagula xisaabtamayo dhammaan muwaadiniintooda, waxay soo saaraan xalka ugu fiican xitaa marka lagu jiro dhibaatooyinka ugu adag." Sidaa waxaa yiri Xoghaye Blinken. Taasi waa sababta Maraykanku uu u taageerayo Moldova, xilli ay la dagaallameyso musuqmaasuqa, samaynayso dib-u-habeyn dimuqraadi ah, iyo horumarinta warbaahin madaxbannaan.
Iskaashiga u dhexeeya Maraykanka iyo Moldova waxa uu ku dhisan yahay qiyam iyo dano wadaag ah. "Waxaan uga mahadcelinayaa Maldova 30-ka sano ee aan saaxibdada nahay," ayuu yiri Xoghaye Blinken, wuxuu intaasi sii raaciyay “Waxaanu dhowreynaa 30-ka xigo.”